Izany ka Malagasy – Page 2 – Blaogin'i Voniary
Tao Manjakadoria, tamin’ny vanim-potoanan’ny faha-Mpanjaka no niseho ny tantara. RAMIAKATRARIVO, mpanjaka nasondrotry ny sainy sy ny fahaizany anefa efa naneho fahaiza-mitarika nampitolagaga ny besinimaro. Vokatr’izany, tsy ny vahoaka teo ambany fifehezany ihany no nankamamy azy fa na ny mponina sy ny andriana manodidina aza dia nanaja azy fatratra. Eny fa na hatramin’ny fahavalo azony babo... Lire la Suite →
Hanatanteraka hetsika ho fankalazana ny faharoapolo taona nanoratany sy nivoizany zava-kanto i Felana RAVELOARISON na Felana ny 6 hatramin’ny 10 desambra ho avy izao. Izy no andriambavilanitra voalohany nanaiky ho vahinin’ny Blaogin’i Voniary. Hizara sombintsombiny amin’ny fiainany àry izy ao anatin’ity resadresaka ity. Voniary : Nanao ahoana ny fahazazanao sy ny nitaizana anao ? Felana : Nobeazina tamin’ny vakiboky... Lire la Suite →